समाजसेवा भन्दै किन राहत बाँडिरहन्छन् कुँवर ? - Janatako News
समाजसेवा भन्दै किन राहत बाँडिरहन्छन् कुँवर ?
काठमाडौं । समाजसेवा गर्न चाहने सबैले एक न एक स्वार्थ राखेका हुन्छन् । बाहिर सेवाको भाव देखाए पनि त्यसैलाई देखाएर समाजमा गलत नियत राख्ने पनि मान्छे पाइन्छन् । यस्तै परिवेशमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएका छन् बाफल काठमाडौंका समाजसेवी ताराबहादुर कुँवरले ।
उनी जहिले पनि समाजसेवामा लागिरहेका छन् । उनले आफ्नो तर्फबाट मात्र होइन अरुसँग पनि सहकार्य गरेर राहत बाँडिरहेका छन् । कुँवरको सक्रियताले अरुलाई पनि राहत वितरणमा उत्साहित पनि बनाएको छ । उनले केही दिनअघि २६ औं चरणको राहत वितरण गरेका छन् । उनले पछिल्लो समयमा बौद्धको हायत होटल अगाडि एक सय जना दृष्टिविहीनलाई राहत वितरण गरेको जनाएका छन् । पूर्व प्रधान सेनापति रुक्मांगत कटवालको प्रमुख आतिथ्यतामा राहत वितरण गरिएको हो ।
राहत स्वरुप चामल, दाल, चिनी, आलुलगायतका सामग्री वितरण गर्दै आएका छन् । उनले पछिल्लो समयमा दृष्टिविहीनहरुमा ठूलो समस्या भएकाले राहत वितरण गर्नुपरेको बताए । उनले २६ औं चरणमा गरी १६ सय ५० जनालाई राहत उपलव्ध गराइसकेका छन् । उनले केही दिनमै कीर्तिपुरमा पनि राहत बाँड्ने योजना बनाएका छन् ।